Izindaba - Ukubuyekezwa kwe-American Youtuber iMankeel Silver Wings
Amaphiko Esiliva EsikaMankeel
Amamodeli amaningi abiwe
I-surfboard kagesi W7
I-surfboard kagesi W6
Ukubuyekezwa kwe-American Youtuber iMankeel Silver Wings
Ukubuyekezwa kwe-youtuber eyi-professional scooter American scooter, isiteshi i-ID Electric Vehicles sisanda kuhlolwa futhi sabuyekezwa kusikuta sethu sikagesi iMannkeel Silver Wings. Isiteshi se-blogger se-YouTube ekuqaleni sasigxile kwizikuta zombane zasemgwaqweni ezinamandla amakhulu, kepha kwathi lapho ebona umklamo wethu oyingqayizivele nenhle wangaphandle weMankeel Silver Wings nokusebenza okuhle, ngokushesha waba nentshisekelo ekuhloleni lesi sikuta sikagesi. Futhi ngemuva kokuthola isithuthuthu sikagesi futhi wasivivinya, wanikeza amagama amaningi okubonga ngombono wenhloso.
Uyemukelwa uchofoze kusixhumanisi se-Youtube esingezansi ukuthola ividiyo ethile yokuhlola
Ungaqaphela ukuthi kunesixhumanisi sokuthenga esiku-inthanethi esethulweni sevidiyo ngezansi kwale vidiyo. Lesi sixhumanisi siyisixhumanisi sesitolo esiku-inthanethi somthengisi wethu. Ungachofoza ukuze ubone ukuthenga okuqondile. Ngasikhathi sinye, sibeka isixhumanisi ku-URL yokuthenga yomthengisi wethu ohambelanayo kuvidiyo ye-blogger obuyekeze imikhiqizo yethu yesikuta sikagesi. Leli yigama lethu elihlukile lokuxhasa ukumaketha kwabathengisi noma abalingani babasabalalisi ababambisana nathi. Yize thina, njengomkhiqizi wokuqala, sinesistimu yethu yezentengiso, inqobo nje uma sibambisana nabasabalalisi abanamakhasimende anomusa, sijabule nokunikeza ukwesekwa okuhlukile okuvela kuzici ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukukhuthazwa kokubambisana kwe-KOL. Lapho ama-blogger osaziwayo e-Intanethi enza ukuhlola, azonikeza amakhasimende ethu ithuba lokumaketha okuhambisana nawo, ukuze amakhasimende ethu athole ukutholakala komkhiqizo okuningi nokuthengisa. Ngoba sibambe ukholo ukuthi ukusiza amakhasimende aphumelele nakho kuyinjongo yethu.
Vele, lena ingenye yezinqubomgomo eziningi zokusekela esizinikeza amakhasimende ethu. Sinezinye izinqubomgomo zokuxhasa ezikhethekile zokuthengisa, njengezindleko zokumaketha nezokukhuthaza zamakhasimende ethu, izingxenye zezipho zamahhala, ukuvikelwa kwemakethe, ukuvikelwa kwentengo, njll.
Uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu, noma unentshisekelo yokuba ngabalingani bethu abangabasabalalisi, Siyakwamukela ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
Isikhathi Iposi: Oct-14-2021
IMankeel Pioneer (Imodeli yangasese)
IMankeel Pioneer (Imodeli eyabiwe)
Isikuta se-Mankeel kagesi APP
Ucingo: 86 -153 0260 5004
© Copyright 2021. I-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd. kanye / noma amanxusa ayo. Wonke Amalungelo Agodliwe